ဗ = ဗိုက်ဆာ လို့ခိုးတဲ့ သူနဲ့ …… ဗိုက်… ဆာ တာထက် ဆိုးတဲ့ အရာ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ဗ = ဗိုက်ဆာ လို့ခိုးတဲ့ သူနဲ့ …… ဗိုက်… ဆာ တာထက် ဆိုးတဲ့ အရာ….
ဗ = ဗိုက်ဆာ လို့ခိုးတဲ့ သူနဲ့ …… ဗိုက်… ဆာ တာထက် ဆိုးတဲ့ အရာ….
Posted by alinsett on Nov 3, 2012 in Arts & Humanities, Creative Writing, Myanmar Gazette | 38 comments
လွန်ခဲ့သော တစ်လလောက်က ဈေးလေး တစ်ဈေးထဲ..ကျွန်တော်…
ထို ဈေးသည်..မနက်ခင်း.. အချိန်မို့ ..ဈေးသည် / ဈေးဝယ်များနှင့်.. ကြိတ်ကြိတ် တိုး.စည်ကားနေချိန်ဖြစ်သည် ။
ရုတ်ရုတ်သဲသဲ..အခြေအနေတစ်ခု… ထ …ဖြစ်ပွါးပါတော့သည် ။
အဖြစ်အပျက်မှာ..မဖြစ်သင့်သော.. ဖြစ်ပျက်မှု တစ်ခု ဖြစ်သည် ။
အသက် ဆယ်နှစ်လောက်သာ ရှိသေးသော..ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို……..
လူကြီး ( ယောက်ျား ရင့်မာ ကြီးများ )…က ၀ိုင်းဝန်း ချုပ်နှောင်ထားပြီး..
အော်ငေါက် ကြိမ်းမောင်း..နေသည် ။
အော်ငေါက် ရုံသာမက…ပဲ….. ယောကျာ်းကြီးတစ်ယောက် ဆိုလျှင်…
ကလေးငယ် ကို….ဖြောင်းခနဲ..မြည်အောင်..ရိုက်ချလိုက်ပါသေးသည် ။
နာကျင်မှုကြောင့် ….. အားခနဲ..အော်ဟစ် ပြီး…ငို ယို..ညည်းတွားနေတော့သည် ။
ကျွန်တော်လည်း….. ပြဿနာတစ်ခုခုတော့…ဖြစ်နေပြီ…ဟု..စိတ်ဝင်စားစွာဖြင့်အနားတိုး…ကပ် လေ့လာမိပါတော့သည် ။
( အမှန်က စာရေးဖို့ … ကုန်ကြမ်း တစ်ခုခုတော့ ရပြီ….ဆိုပြီး..သွားစပ်စုတာပါ )
ငှက်ပျောင်္သီး ခ်ိုးခြင်း ပြဿနာ ဖြစ်နေသည် ။
ကလေးငယ်က …( ငှက်ပျောသီး.ရောင်းသူ / ခုဏ ကလေးငယ်ကို ရိုက်နှက်လိုက်သူ ) ထံမှ…
ငှက်ပျောင်္သီး တစ်ဖီးကို…အလစ်သုတ်မိခြင်း ဖြစ်သည် ။
မလစ်ခင်…သုတ် ပြေး ၍…. မိ..သွားခြင်းဖြစ်သည် ။
အခုတော့..ရိုက်နှက် ကြိမ်းမောင်းခံနေရပေပြီ ။
ကလေးငယ်ကို ရိုက်နှက်သည် အထိ…မလုပ်သင့်ပါ ။
နီးစပ်ရာ.ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေး ရုံး( သို့မဟုတ်…) ရဲစခန်း တစ်ခုခု သို့ပို့ ပြီး…အရေးယူ သင့်ပါသည် ။
အခုလို ကလေးငယ် တစ်ယောက်က်ို…. ၀ိုင်းဝန်းချုပ်နှောင်ပြီး…. ကိုယ့် သဘောနှင့်ကို… ရိုက်နှက် အပြစ်ပေးနေတာတော့….
အခုလို… အပြစ်ကို… ၀န်ခံပြီး…. အချုပ် အနှောင် ခံထားပြီးသော…
ထွက်ပြေး ဖို့ ရာလည်း..ဘယ်လို မှ မဖြစ်နိုင်သော..အခြေအနေကြားမှ
ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို…… သူတို့…. ဘာအကြောင်း နှင့်မှ……
ကိုယ့် သဘောနဲ့ ကိုယ်…အပြစ်မပေးသင့်တော့ပါ ။
တရားဥပဒေ နှင့် အညီ ( တကယ့် တရားသော ဥပဒေ နှင့်အညီ…) မှန်မှန်ကန်ကန်…ဆုံးဖြတ်ပြီး..
ထိုက်သင့်သော အပြစ်သာ ပေးရပါလ်ိမ်မည် ။
၀ိုင်းအုံကြည့်နေကြသော…. လူများစွာထဲမှ…. တစ်ယောက်က ……
မင်း…ဘာလို့သူများ ပစ္စည်းကို ခိုးရတာလဲ.… ဟု…
ကလေးငယ်က…ငိုယိုညည်းတွားလျက်မှ…. ပြန်ဖြေပါသည် ။
( ပြန်မဖြေလျှင်..ထပ် ရိုက်မည်ကို ကြောက် ရွံ့ ၍ လန့် ပြီး..ဖြေခြင်းလည်း ဖြစ်သည် ။ )
သား……. ဗိုက် ဆာလို့ ပါ …..
အဖြေက ..ရှင်းရှင်းလေး..သာ ဖြစ်သည် ။
ဗိုက် ဆာလို့ ….ခိုးတယ် ။
ရှုပ်ထွေး သွားပါတော့သည် ။
( ကျွန်တော်က ထော်လော်ကန့်လန့်ကောင် ဆိုတော့…
ထော်လော် ကန့် လန့်အတွေးတွေ..နဲ့ .. ရှုပ်ထွေးသွားတာပါ ။ )
ဗ်ိူုက်..ဘယ်လောက် ဆာ..ဆာ..သူများ ပစ္စည်းကို ခိုးမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ။
သူတပါး ဥစ္စာကို ခိုး ယူခြင်း ၏ အပြစ်ကို…. ကျွန်တော်… ကြားဖူး / သိ ဖူး / မှတ်သား ဖူး..နေ၍ မခိုး ၀ံ့ခြင်းဖြစ်သည် ။
သူ့အရွယ်ကလေး ဖြင့်….. သံသရာ အထိ… မတွေးတတ်သေး ။
သို့ သော်………………….. သေသေချာချာ ဆိုဆုံးမ ထားလျှင်တော့…. သူတပါး ပစ္စည်းဥစ္စာ ခိုးယူခြင်းဆိုတာ..မကောင်းမှု.ဆိုတာလောက်တော့
အူ မ ……….. မတောင့်တဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်သေးတဲ့ အရွယ်….
အသိ ဥာဏ် ဖွံ့ ဖြိုးခွင့်မရသေးတဲ့ …. ကလေးငယ်…မို့ …….
ဒီ တစ်ဘ၀ ပဲ…..။
ငတ်မှာကြောက်လို့ …. ခိုးစားလိုက် မိရင်…….
အဲဒီလို..ကျွန်တော်…. စိတ်ထဲက.ပြောနေမိပါသည် ။။
ကျွန်တော်……………အတွေး..များစွာဖြင့်…နယ်ချဲ့ နေမိပြန်ပါသည် ။
( ကျွန်တော်..သူတပါး အမှားကို…တွေ့ ရင်…..
အဲဒီလို အမှားမျိုး ကိုယ့် မှာ..ရော..ရှိသလား..လို့ …. တွေးမိပါတယ် ။
သူတပါး မှန်တာ လုပ်တာတွေ့ရင်လည်း….
အဲဒီလို… ကောင်းတာ / မှန်တာတွေ…. ကိုယ်တိုင်..လုပ် ဖူး သလား..လို့ တွေးပါတယ် ။
အဲဒီလို… မိမိကို မိမိ ဝေဖန် စစ်ဆေး တတ်အောင်…. ဘာသာရေးစာပေ များက… ကျွန်တော့်ကို လမ်းပြပေးခဲ့ပါသည် ။ )
ဘယ်သူ့ဆီက…..
စဉ်းစား သည် ။
မ ခိုး ပါ ။
သူတပါး ဥစ္စာ ပစ္စည်းကို… ကျွန်တော်…မခိုးယူခဲ့ပါ ။ ခိုး..မစားပါ ။
သေချာလား….ဟု ထပ်ခါ ထပ်ခါ… မေးတော့…….
အဖြေက နောက်တစ်မျိုး..ထွက်လာသည် ။
ထင်မှတ်မထားသော..ထောင့်မှ…. ထွက်လာသော အဖြေဖြစ်သည် ။
ထောင့်တစ်ခုမှ….. ဖြေလျှင်…… ကျွန်တော် သူခိုးမဟုတ် ပါ ဟု ဖြေရ မည် ဖြစ်သော်လည်း……
အခြားထောင့်တစ်ခုမှ …… ကြည့်လျှင်တော့……
သူခိုးတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါသည် ။
ကျွန်တော်သည်..သူခိုးတစ်ယောက် ဖြစ်သည် ။
စာရေးဆရာ တစ်ယောက် ဖြစ်ချင် လာချိန်မှာ……
စာတွေ..အများကြီး..ဖတ်ဖို့ ကြိူးစားပါသည် ။
ဖတ်လည်း..ဖတ်နေပါသည် ။ ( သို့ သော်..ကျွန်တော်..စာတွေ ဖတ်ဖို့ ..အများကြီးလိုပါသေးသည် ။ )
စာရေးဆရာမ ဂျူး…. … တို့ …. ရေးသော…. ရေးဟန်..များကို…..
တာရာမင်းဝေ ၏ စာပေ အနုပညာ ဖန်တီးမှု. / တီထွင်မှု.. / စကားလုံး…အထားအသို ကြွယ်ဝ မှု /
၀တ္ထု ရေးဟန်…. ပိရိ သေသပ်မှုများ..ကို……အားကျ စွာ……. အတု ခိုးမိပါသည် ။
( အတု ခိုးခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
အစစ် ဖန်တီး.ပြု လုပ်ခြင်း မဟုတ် ၍
အစစ် / ရေးသူ လောက် မကောင်းနိုင် တာ…. သေချာပါသည် ။ )
ဆရာမ ဂျူး ၏ အတွေးများကို….ရေးပြသည့်ဟန်…
တင်ပြ ဟန်များ အား..သဘောကျ မိ၍….. ဆရာမ ဂျူး..၏ စာ အသွားအလာ..များနှင့်..တူအောင်လည်း…
( ဒါလည်း….အတု ခိုးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည် ။ )
ဆရာဇော်ဇော်အောင်…၏ ဝေဖန်ရေး….အနုပညာ..တင်ပြ ပုံ ကို ကြိုက်သည် ။ ဆရာဇော်ဇော်အောင်ရေးသော..
စကားပြေရေးဟန်…ကို လည်း..သဘောကျတော်မူပြန်သည် ။
ထို့ ကြောင့်….. အတု ခိုး ရေးသည် ။
ထို တစ်ယောက် ချင်းစီ နှင့်…တူအောင်လည်း…. အတု ခိုး ရေးသည် ။
ထို..သုံးယောက်လုံးနှင့်..တူအောင်လည်း…အတု ခိုး ရေးမိပါသည် ။
စု / တု / ပြု..သည်..ဟု ကိုယ့်ဘာသာ အမည် တပ်ပြီး..စိတ်ဖြေသိမ့်သည် ။
အတု ခိုးသည်….ဟု….. ဆိုခဲ့ပါသည် ။
စကားမကျန်အောင်..ရှင်း ခဲ့ချင်ပါသည် ။ တာရာမင်းဝေ / ဇော်ဇော်အောင် / ဂျုး….. တို့၏ စာ များကို… အတု ခိုးရာတွင်….
သူတို့ ရေးထားသော…စာပိုဒ်များကို…… သူတို့ ရေးထားသည့် အတိုင်း……. ကူးယူ၍…
တစ်ခါမျှ..မခိုးခဲ့ပါ ။ တစ်လုံး..တစ်ပဒ မျှ… မခိုးခဲ့ပါ ။
ကျွန်တော်…အတုခိုးသည်မှာ……တာရာမင်းဝေ / ဇော်ဇော်အောင် /ဂျူး…တို့ဖန်တီးသော…..
ရေး ဟန် / တွေးဟန်…. တင်ပြ ဟန်..( ဟန်….) တို့ ကိုသာ…….အတုခိုးခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
ကျွန်တော်သည်….. သူခိုးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည် ။
ကမ္ဘာမှာ….ကျော်ကြားသော…… ပုဂ္ဂိုလ်များ…၏ တော်သော / ထက်သော…/ ကောင်းမွန်သော…. အချက်များကို…..
တွေ့ ရ ကြားရလျှင်လည်း….. ကျွန်တော်..အတုမခိုးပဲ… မနေနိုင်ပါ ။
ကျွန်တော့် ထက် …တော်သော..သူတော် / သူကောင်းများ…၏ စိတ်ထား အတိုင်း…ကျွန်တော်…အတုခိုး..ချင်မိပါသည် ။
ကျွန်တော့် ထက်….တော်လျှင်../ ကျွန်တော့် ထက်..ကောင်းလျှင်…ကျွန်တော့် ထက် သာလျှင်.. ကျွန်တော်…အားကျ ငေးမော….
အတု ခိုးချင်မိပါသည် ။
ကျွန်တော်..တော်တော် ညံ့နေပါသေးသည် ။
ထို့ ကြောင့်လည်း..အတု ခိုးနေ ရခြင်း ဖြစ်သည် ။
မကောင်းတာ…./ မမှန်တာတွေကိုတော့…… ကျွန်တော်…အတု မခိုးချင်ပါ ။
ကျွန်တော့် စိတ်ထားကို…..နူးညံ့သိမ်မွေ့ အောင်…
ကျွန်တော့် အသိဥာဏ်ကို… အမှားအမှန်…. ခွဲခြား တတ်အောင်….
တော်နေပြီ / ကောင်းနေပြီ..လို့ တော့……
ကျွန်တော်….ဆိုးတဲ့ လူ.တစ်ယောက် မဟုတ်သေးဘူး..လို့ တွေးမိပါသည် ။
အမှား / အမှန်ကို… ခွဲခြား နားလည်အောင်…ကြိုးစား…နေသော်လည်း…
အမှား တစ်ချိ်ု့ ကို..လုပ်မိနေဆဲ……
အမှန်တရား..တချို့ ကို…. မျက်ကွယ်ပြုမိနေဆဲ…..
အမှားတစ်ခုထဲကို..နောက် တစ်ခါ…. ထပ် ထပ် မလုပ်မိဖို့ တော့….
ကျွန်တော်… အသေအချာ..ကြိုးစားရမည် ။
ကောင်းတာတွေး…./ ကောင်းတာပြော../ ကောင်းတာတွေ..လုပ်မိအောင်…..
ကျွန်တော့်ကို..တည့်မတ် ထိန်းကျောင်း …./ လမ်းပြ ပေးနေသည့် အရာများ….မှာ….
တရား…./ ဘာသာရေးစာပေ များ ဖြစ်ပါသည် ။
ကျွန်တော့်ကို အများဆုံး… ပြုပြင်ပြောင်းလဲ..ပေးသော…. စာအုပ်များမှာ…
ဆရာတော် ဦးဇောတိက ( မဟာမြိုင်တောရ ) ၏ တရားတော် စာအုပ်များ..နှင့်…
ဆရာတော် ဥူးသုမင်္ဂလ ( ဒယ်အိုးဆရာတော် ) ၏ တရား..တော် များ…..။ ။
မပြည့်ဝ / မရင့်ကျက်သေးပါ ။
အများကြီး…./ အများကြီး..လိုအပ်နေသေးသည် ။
အများကြီး……… အတု ခိုးး နေရဦးမည် ။
အတု ခိုး ခြင်းသည်…မကောင်းပါ ။
( အတု ခိုးနေသေးသ၍)
စင်ကြယ် ပြီ…. ဟု မဆိုနိုင်ပါ ။
ကိုယ်ပိုင်အတွေး../ ကိုယ်ပိုင်အရေး.နှင့်…. ကိုယ့်ဟန်..ကိုယ့်မူ..အတုိင်းသာ…. ဖန်တီးနိုင်အောင်…
အတုကို..မခိုး မိဖို့ လည်း…. လိုပါသည် ။
အဲဒီ အတုကိုမှ… ကိုယ်က…သွားပြီး…. အတု ခိုးလိုက်သောအခါ…….
စစ်မှန်ခြင်းနှင့် အတော်လေး..ဝေးဝေးကိုရောက်သွားပါလ်ိမ့်မည် ။
အတုခိုး မှ ဖြစ်မည် ။
ကောင်းတာ / မှန်တာ ကို …. .အတု ခိုးမှ ကောင်းသော ရလဒ် ထွက်လာမည် ။)
အစစ်ကိုပဲ..ခိုးးးးးး ခိုး…
ခိုးနေရပြီ..ဆိုထဲက……
( မခိူုးပဲ…. ကိုယ်တိုင် သိအောင် ../ ကိုယ်တိုင် တတ်အောင် … ဖန်တီးနိုင်မှ….စင်ကြယ် ပါမည် ။ )
ခိုး..နေရတာ ကိုက… မသန့် ရှင်း မစင်ကြယ်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပါသည် ။
ဘာကြောင့်……. အတု ခိုးခဲ့ပါသလဲ………………
( ဘာကြောင့်…..အစစ် ခိုးခဲ့ပါသလဲ.. )
ဗိုက် ဆာလောင် လို့ ….. ခိုးတာပါ….တဲ့ ။
ဘာ…..ဆာလောင်နေလို့ …. ခိုးတာလဲ…..။
စာပေ အနုပညာ ဖန်တီးမှုမှာ…တော်တဲ့ 
ကျွန်တော်..လေးစား..အားကျရတဲ့ …. ဆရာတွေ..ရဲ့ ………….ဟန်…ကို အတုခိုးခဲ့တာ ။
အတု ခိုးချင်ခဲ့တာ ။
ကျွန်တော်… ထင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် အောင်မြင်ချင်နေတယ် ။
ကျွန်တော်က…..အောင်မြင် မှု ကို…. ဆာလောင်နေလို့ ….အတု ခိုးတယ် ။
ငှက်ပျောသီင်္း..ခိုးတဲ့ ကလေးငယ်က….. ဗိုက် ဆာလို့ …ခိုးတယ် ။
ခိုးခြင်း…… တူ…/….မတူ… ကို… ခဏ ထားပါဦး ။
( အောင်မြင် မှု ဆာလောင်တာနဲ့/ ဗိုက် ဆာလောင်တာ )
ဗ = မှာ… ဒီလို…
စာ အရှည်ကြီး…တွေး ခဲ့ ../ ရေးခဲ့ပါတယ် ။
ကျွန်တော့် ရဲ့ အက္ခရာများ..နဲ့ ခရီးသွားခြင်းမှာ….
မမောမပန်းနိုင်…လိုက်ပါ..ခံစား..အားပေးခဲ့ကြတဲ့ …
ဂေဇက်…. ရွာသူ / ရွာသားများ..
ကျွန်တော်..ချစ်သော…. စာချစ်သူ / စာဖတ်သူများ….
သတ်ပုံအမှားက အစ…အချက်အလက် အမှား.တွေ… / ပြောမှား..ဆိုမှာ.တွေ..မပါအောင်…
ဆက်လက် ရေးသား..နိုင်ဖို့ …. အားအင်များစွာ..ထည့်ပေးနေသော….မိတ်ဆွေများ…
ကျေးဇူး….ထာဝရ… တင်လျက်ပါ..လို့ …။
ဆက်လက်ပြီး….. အ = အထိ..ခရီးဆက် ချင်သေးတာမို့ ….
ဆက်လက် အားပေး ကြပါဦး.လ.ို့ …….
မင်းသိင်္ခရဲ့ ဝတ္ထုထဲမှာတော့ ၊ မိုးညိုဆိုတဲ့ ကလေးလေး လဘက်ရည်ဆိုင်က မုန့် ခိုးစားတာကို မိသွားလို့ ၊ ဝိုင်းဖမ်းပြီးရိုက်တဲ့အခါကနေ ၊ အဲ့ကလေးဟာ ကြီးလာတော့ ဟီးရိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ် လို့ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဆုံးတော့ ကြိုးစင်တက်သွားရတာပေါ့လေ
ဗိုက်ဆာလို့ ခိုးတယ်ဆိုတာ အမှန်တကယ်ဆိုရင် ၀မ်းနည်းစရာပါပဲ။
ကိုယ်တိုင်တော့ အဲလိုကလေးသခိုးတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေ ရှိနေတာ့ အဲဒီကလေး ညာမပြောဘူးလို့ မဆိုနိုင်ဘူး။
များသောအားဖြင့် ကလေးသူခိုးတွေရဲ့နောက်မှာ လူကြီးတွေ ရှိကြတယ်။
သူခိုးဖမ်းမိလို့ ရဲစခန်းကို ပို့ဖူးတယ်။
တရားစွဲရင် အလုပ်ရှုပ်မယ်၊ ငွေကုန်မယ် ဆိုပြီး ပြောတာနဲ့ ၁ရက်ချုပ်ပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ရတယ်။
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတော့ သူ့ဆီမှာ သူခိုးဖမ်းမိတော့ ကျွန်တော်သူခိုးပါဆိုပြီး စာတန်းကိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လမ်းလျှောက်ပြခိုင်းပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။
သူခိုးပါ..ဆိုတဲ့စာတန်းကိုင် လမ်းလျှောက်ပြ ခိုင်းပြီး..
ပြန်လွှတ်တဲ့ နည်းလေးက… မဆိုးဘူးဗျ ။
အရှက်နည်းနေတဲ့သူခိုးဆိုရင်တော့… မထိရောက်ပေမယ့်…
ရှက်တတ်တဲ့သူခိုး ဆိုရင်တော့.. ထိ တယ် ။
အင်း..ဘယ်သူမဆို..ဒီလို စာတန်းကြီး ကိုင်ပြီး..လမ်းတကာလျှောက်သွားဖို့ ဆိုတာ..
အဲဒီကောင်လေး… ညာပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ ။
ကျွန်တော်က အဲဒီကောင်လေး ရဲ့ အဖြစ်ကို အခြေခံပြီး…
စာပေ ကိစ္စ မှာ…..အတု ..ခိုးဖူးတယ်..ဆိုတာလေး.. ဖြန့်တွေး.ကြည့်တာလေ ။
အက္ခရာ တွေ.. နောက် အဆက်မပြတ် လိုက်ပါ ခံစား နေတော့…
ကျေးဇူး.မတင်ပဲ.. မနေနိုင်ဘူးဗျို့။
က​လေးက ဗိုက်တစ်ကယ်ဆာလို့ ခိုးတာဆိုရင်တော့ သနားစရာပါ
ဥပဒေမဲ့ ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးတာထက်စာရင် သက်ဆိုင်ရာကိုပို့ ပြီး
ဆုံးမ သင်ကြားပေးတာက သူ့ အနာဂတ် အတွက်ပိုသင့်တော်ပါတယ်
တချို့ ကြတော့လဲ သားသမီးချင်း မစာနာတတ်ကြဘူးလေ….
ကွန်းမန့် မပေးဖြစ်ပေမဲ့ အမြဲအားပေးနေပါတယ်..
မ မန့် ဖြစ်တာကလည်း ဥာဏ်မမှီလို့ ပါ….
ဖြူနေတဲ့ ဆံပင် ပိုဖြူတော့မှာ ဘဲ .. :hee:
အန် … ကိုယ်တော်လေး။ ဗိုက်ဆာလို့ ခိုးတာ အပြစ်ရှိလို့လား။ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင် ငရဲတော့ကြီးပြီပေါ့။ ဒါဆို ဒီငရဲကတော့ အထင်ကြီးစရာမရှိပါလားကွယ်။ သံသရာလည်း ပါပြီပေါ့။ ဒါဆို ဒီသံသရာလည်း အထင်ကြီးစရာ မရှိတော့ပါလားကွယ်။ ဟီး … ဟီး အစ်မက ငရဲပြည်မှာ ဘွတ်ကင်လုပ်ထားပြီးသား။
ကလေးကအလစ်သုတ်ရင်.. ပိုင်ရှင်ကရဲတိုင်ရင်.. ကလေးမှာအမှုဖြစ်ပါတယ်..။
ရဲကနေ… သူ့ဘ၀(ကလေးဘ၀)မှတ်တမ်းထဲ.. ခိုးမှုကျုးလွန်ဖူးသူအဖြစ်.. သမိုင်းမှတ်တမ်းထည့်လိုက်ပါလိမ့်မယ်..။
ပိုင်ရှင်ကရဲကိုမတိုင်ပဲ.. ကိုယ်တိုင်..လက်စွမ်းပြရိုက်နှက်ဆုံးမရင်တော့.. အင်မတန်အပြစ်ကြီးပါတယ်..
အဲဒီရိုက်တဲ့… ချုပ်တဲ့..လူကြီးတွေ. ကလေးနှိပ်စက်မှုနဲ့..ထောင်ထဲဝင်ရမှာတော်တော်သေချာတယ်..။
ကလေးကိုဖမ်းချုပ်ထားတာကို.. ၀ိုင်းအုံရပ်ကြည့်နေတဲ့…လူအုပ်ကြီးကို.. အံ့သြမိတယ်..
မင်း…ဘာလို့သူများ ပစ္စည်းကို ခိုးရတာလဲ.… လို့..
ကလေးကို.. သတ္တိကောင်းကောင်းနဲ့.. ရိုက်နက်လက်စွမ်းပြနေသူကို.. “ခင်ဗျားတို့မှာကလေးကို.. ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှ.. ရိုက်နှက်ဆုံးမခွင့်မရှိဘူး..” ပြောကြရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
ကလေးက..ငါ့ပစ္စည်းခိုးလို့.. ငါကရိုက်နှက်ဆုံးမရမယ်ဆိုတာ.. လူ့အခွင့်အရေးနားမလည်သူတွေလုပ်ရပ်ပါ..။
ဗ = ဗိုက်ဆာ လို့ခိုးတဲ့ သူနဲ့ …… ဗိုက်ဆာလို့..ခိုးတဲ့သူထက်..အပြစ်ကြီး..ဆိုးဝါးတဲ့ .. ယောက်ျားဘသား.. လူအုပ်ကြီး.. လို့ခေါင်းစဉ်တပ်လိုပါကြောင်း..။ :harr:
ငါးပါးသီလ..အာဒိန္နာဒါနကို….. ခေတ်မမှီဖွင့်ဆိုချက်.. ကမောက်ကမကြောင့်.. အခုလို..ဖြစ်ကုန်တယ်ထင်ပါကြောင်း…
ကျုပ်အမေကတော့ မနက်ဈေးသွား ပြန်လာရင် ခဏခဏ ဈေးခြင်းထဲက ငါးထုပ် အသားထုပ် အနှိုက်ခံရတယ်။ အလစ်သုတ်သူ အများစုက ခလေးတွေများတယ်။ မိလည်း များသောအားဖြင့် မာန်မဲပြီး လွှတ်ပေးလိုက်တာများတယ်။ အချို့ရပ်ကွက်တွေမျာဆို အဲလိုကောင်ဆိုးမျိုးတွေ ဒုက္ခသိပ်ပေးလွန်းတော့ အရပ်က သီးမခံနိုင် ဖြစ်တတ်တယ်။ ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်တွေက မြို့ထဲက တိုက်ခန်းတွေလို အလုံပိတ်မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲသလို လှစ်ကနဲ ဝင်ဆော်ဆော်သွားကြတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် ဈေးရောင်းစား၊ ကြုံရာကျပန်း ပလပ်စတစ် အမှိုက်ကောက်စားရတဲ့ ခလေးတွေ ရပ်ကွက်ထဲ ပေးအဝင်မခံလို့ ဒုက္ခရောက်တယ်။ သဂျီးကတော့ ပြောမှာပဲ သူမှ မခံရဘူးသေးတာကို…။ သူ့ပစ္စည်း တပြားဖိုး ပါကြည့်ပါလား၊ သူခိုးလေးတွေ ခိုးတဲ့လက်ဖြတ် ခေါင်းဖြတ်နဲ့ တာလီဘန်စတိုင် လေသံပြောင်းသွားမည့်သူဂျီး.. ဒါမြန်မာပြည်ဗျ အာဖဂနစ္စတန် မဟုတ်ဘူး… :buu:
(သူခိုးပါ..ဆိုတဲ့စာတန်းကိုင် လမ်းလျှောက်ပြ ခိုင်းပြီး..
ပြန်လွှတ်တဲ့ နည်းလေးက… မဆိုးဘူးဗျ ။)
တစ်ခါက တော့ အိမ်တစ်အိမ်ကို သူခိုးတက်ခိုးတာ လက်ဝတ်လက်စားတွေပါသွားတယ်။.
အဲဒီသူခိုးက သွားရောင်းတော့ အတုတွေလာရောင်းလို့ဆိုဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။
အခိုးခံရတဲ့ အိမ်က သူခိုးကို သတ်ပစ်ချင်လောက်အောင်စိတ်ဆိုးသွားကြတာ။
သူကြောင့် အတုတွေဝတ်တာ လူသိလို့တဲ့.
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ လိုင်းကားပေါ်ကနေ အရက်ဖာတစ်ဖာ မပြေးပြီး သွားရောင်းတာ။
ဖြစ်ချင်တော့ အရက်အတုလုပ်တဲ့ဂိုဏ်းကို လိုက်ရှိနေတာနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ သူခိုးလာတာက
အတုတွေဖြစ်နေတော့ အဖမ်းခံလိုက်ရုံတင်မက အမူ့တောင်ပိုကြီးသွားသေးတယ်တဲ့
သူများဟာကို အတုခိုးပါများ ရင် ကိုယ်ပိုင်ဟန်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်နော်
အားလုံး အထူးကျေးဇူး တင်ပါတယ်ခညာ ။
သူကြီးမင်း အကြံပေး.တင်ပြ သလို …
ဗ = ဗိုက်ဆာ လို့ခိုးတဲ့ သူနဲ့ …… ဗိုက်ဆာလို့..ခိုးတဲ့သူထက်..အပြစ်ကြီး..ဆိုးဝါးတဲ့ .. ယောက်ျားဘသား.. လူအုပ်ကြီး…လို့ …
ဆာလောင်မှု နှစ်ခု (ဗိုက်ဆာတာနဲ့အောင်မြင်မှု ဆာတာ…) ကို..
( ခိုးမှု နှစ်ခု အတုခိုးမှု နဲ့ငှက်ပျောသီးခိုးမှု. ) ကနေ…တွေး ယူ ခံစားမိလို့ ..
ဆက်လက် ခံစားနေဦးမယ့် အက္ခရာများလည်း….
အက္ခရာတွေက နောက်ပိုင်းရောက်လေ တဖြည်းဖြည်းချင်း ပိုဖတ်လို့ ကောင်းလေ ဖြစ်လာတယ်။
ကျမကတော့ လောလောဆယ် မှာ ခရီးသွားခြင်းကို ဆာလောင်နေတာမို့ အချိန်ခိုးဖို့ ကြိုးစားနေမိတယ်
တဖြည်းဖြည်းချင်း ပိုဖတ်လို့ ကောင်းလေ ဖြစ်လာတယ်။ ..ဆိုလို့ …
ဗိုက်ဆာလို့ဆိုပေမဲ့
အသက်က နှစ်ဆယ်ဆိုတော ဒုက္ခိတလဲမဟုတ်ရင့်ခိုးမစားပဲ လုပ်စားဖို့ တန်နေပါပြီ
ဗိုက်ဗိုက်တို့ လို့ 
ဗီတာမင် မပြည့်တပြည့်နဲ့ 
ဗြောက်အိုးတွေ ဖောက်လို့ 
ဗျစ်အရက်နဲ့ဗိုလ်ကိတ်ပဲတွေ မြည်းပြီး
ဗြုန်း ဆို အိမ်ကမိန်းမလိုက်လာပြီး
ဗျစ်ဗျစ်ဗျစ်ဆို အီးထွက်အောင် ဗျင်းမယ်လုပ်လို့ 
ဗုန်းဗုန်းမလဲခင် ပြေးထလိုက်တာ ဗားကရာ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကနေ ဗဟန်းထိတောင် ရောက်သွားတယ်။
ဗ = အက္ခရာတွေကို…
ဗြဲ ခနဲ ဗြဲခနဲ…သုံးသွားတာများ..
ဗြုတ်စဗြင်းတောင်း..ကွန်နက်ရှင် အစုတ်ပြတ်နဲ့ဖတ်ရတာမို့ 
ဗ အက္ခရာ တစ်လှေ ကြီးကို..တွေ့ လိုက်ရတော့
ဗွမ်းခနဲ..ရေထဲ ခုန်ချလိုက်ရသလို..လန်းဆန်းသွားတယ် ။
ဗြဲ ဗြဲ မမြည်တတ်တဲ့ 
ဗ အက္ခရာတွေ.ကို ဖတ်ရတာ..
ဗျာ..လို့ တောင်..ခေါ်သံကို မထူးမိဘူး ။
အွန် ဗထက်ချိုင့်တွေ ဗိုလ်ကျနေပါရောလား ဗ အက္ခရာတွေတယ်ပေါကြပါလား..။
ဒီမြို့နယ်ကို ပြောင်းလာတဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်း အရာရှိက အတော်ကို ဗိုလ်ကျတယ်တဲ့၊
အဲဒီမှာ တစ်ယောက်ကပြောတယ် အဲဒီအရာရှိမှာ ပါးစပ်ပါလား ဗိုက်ပါလားတဲ့၊
ပါးစပ်နဲ့ဗိုက်တော့ လူတိုင်းပါတာပေါ့ကွ ပြန်ဖြေကြတော့ အဲဒီလူက ထပ်ပြောတယ်၊
ပါးစပ်ပါရင် ဗိုက်ပါရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုဘဲ။
လ အတန်ကြာသော အချိန်မှာတော့ အဲဒီမြို့နယ်မှာ အရာရှိက ဗိုလ်ကျတယ်ဆိုတာ မကြားရတော့ပါ။
အလုပ်ကိုင်ရတာရော ပြောဆိုဆက်ဆံရတာရော အဆင်ပြေသွားကြတယ်သိရပါ၏။
အဲဒါ ပါးစပ်နဲ့ဗိုက်ပါလို့ ဗလာမပါသော လက်ဆောင်လေးတွေတော့ သူအိမ်မှာစီကာရီကာ ရှိသဗျ။
ကလေးကို ခိုးလို့ဆိုပြီး ၀ိုင်းရိုက်ကြသူတွေကို .. တသက်မှာ တစ်ခါမှ မခိုးခဲ့ပါဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိပ်ပြာလုံတဲ့သူရှိပါ့မလား.. ကျမကတော့ ဘ၀မှာ ခိုးခဲ့ဘူးတာတွေရှိပါတယ်.. ကလေးဘ၀တုံးက သူများအိမ်က စာအုပ်လေးတွေလှတာ ဖတ်ချင်တာတွေ့ရင် ခိုးဖူးပါတယ်..
ကိုယ်တောင် မစောင့်ထိမ်းနိုင်တဲ့ သီလကို ကိုယ့်ထက်အင်အားနဲသူကို အနိုင့်အထက် စောင့်ထိမ်းခိုင်းမယ်ဆိုတာကရော.. တရားပါ့မလား… :bar:
ဗ- အက္ခရာ ကားတွေတော့ သံရည်ကြိုစက်ရောက်ကုန်ပြီ…
ငယ်ငယ်ကတော့ မုန့် ခိုး စား လို့ ဆရာမရိုက်တာခဏခဏ ခံခဲ့ရဘူးတယ်…
အဲဒါတောင် ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ် ခိုးစားတာနော်..
သူများပစ္စည်းခိုးဘို့ ဆိုတာ တော်တော် မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ …
အက္ခရာ ခရီးစဉ်မှာ… အဆက်မပြတ် လိုက်ပါ..လာလို့ ..
ကိုခင်ခ ပြောပြတဲ့ 
ရယ်ချင်ချင် ဖြစ်တွားတယ် ။
ဒါမျိုးလည်း..ကျနော်..ကြားဖူးနေပါရဲ့။ မြင်လည်း..မြင်ဖူးနေပါရဲ့ 
အဆက်မပြတ် ခံစား..အားပေး.လာလို့ ကျေးဇူးပါ..ကိုခင်ခကြီးရေ..
ဘ = မှာ..
ဘာရယ်မဟုတ်ပေမယ့်… စောင့်မျှော် အားပေးပါဦးနော် ။
သားကတော့…သူများမုန့် ပါ..ခိုးစား ဖူးတယ် ။
အတန်းထဲမှာ.. နည်းနည်း.ကြည့်မရတဲ့ကောင်မလေးတွေ.. ရဲ့ 
သားတို့ .သူငယ်ချင်းတစ်စု..စုပြီး.ခိုးစား တာလေ..။
မနေ့က မန့်ထားဒါလည်း ချိဘူး …
ထားဒေါ့ .. မရှိဒေါ့ ဗားရှင်း အသစ်နဲ့ ထပ်မန့်ဒါဘော့ ..
ဂလို .. ဂလို …
အောင်မြင်မှုကို ဆာလောင်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးပေါ့ဗျာ ..
အိုက်ဒီ စကားလုံးဂ အနုပညာ ဆိုတာကို နည်းနည်းလေး အရိပ်ထိုးစေသလားလို့ပါ ..
အနုပညာ ဆိုတာက ..
ကိုယ် တတ်အားသရွှေ့ အားထုတ်မယ် …
ပြောင်မြောက်အောင် အားထုတ်မယ် …
အဲ့ဒီ အားထုတ်မှုတွေ အားလုံးက ကိုယ့်အတွက် မဟုတ်ဘူး …
အခြားသူတွေ အတွက်သာ ဖြစ်နေမယ် …
အများအကျိုးဆောင် ကိုယ့်အကျိုးပြောင် .. အဲလေ .. အောင် ဆိုသလိုပေါ့
အဲ့ဒီလို အခြားသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှုတွေက
အော်တိုမီးတစ် အောင်မြင်မှု ဆိုတာကို ကိုယ့်ဆီမှာ ဖြစ်လာလေမလားပဲ ဆိုပြီး …
ဟိုအကောင်ရဲ့ ဦးနှောက်လောက်နဲ့ တွေးမိလိုက်လို့ အခုလို ပြောကြည့်ဒါဘာ …..
ဘာရယ် ဟုတ်ဘူးနော့ …
ဝင်ပီး လေပေါ့ကြည့်ဒါ ..
ဦးဦးအံစာ…..ပြောမှ တားတား ထိပြီ ။
ဗ မှာ..ဘာေ၇းရမှန်းမတိလို့ လေ..
အဲဒါ… ခိုးမှုလေး.တစ်ခုတွေ.တာနဲ့ …
ရေးစရာတော့ ရပြီကွ…လို့ … စိတ်ကူးဥာဏ် ကွန်မြုးပြီး..ရေးလိုက်ထှာ..
ဆိုင်….လောက် ၏ …ပေါ့နော်..။
ဒီလို..စစ်မှန်တဲ့ အနုပညာကို ဖန်တီးခြင်း ဆိုရာမှာ..တော့
အောင်မြင်မှု…..ဆာလောင်တာဟာ.. မသန့် ရှင်းမှု.တစ်ခုလို့ …
ပြောလို့ ရမှာပါ ။
အနုပညာကို အရိပ်ထိုးတယ်ပေါ့ဗျာ.. ။
လောလောဆယ် ကျွန်တော်က… အောင်မြင်မှု ကို..ဆာလောင်တယ်..လို့ 
ကိုယ့့်ဘာသာကောက်ချက်ချပါတယ် ။
အောင်မြင်လာမှ ကျွန်တော်.ရေးချင်တဲ့အနုပညာ ဖန်တီးမှုတွေ.ရေးမယ် ။
အနုပညာတွေ..ကိုယ် လိုချင်သလို ဖန်တီးဖို့ ..ဆိုရာမှာ.အောင်မြင်မှု တစ်ခု / နာမည် ကျော်ကြားမှု တစ်ခု
အရင်ဆုံး လိုအပ်တယ်..လို့ .. ယူဆပါတယ် ။ ဒါကြောင့်…
အောင်မြင်မှု ကို.. လိုအပ်ပါတယ်
ပြိးမှ..အောင်မြင်ကျော်ကြား..လူသိများ တဲ့လူသားတစ်ယောက်က.. ဖန်တီးပြတဲ့ 
အနုပညာစစ်စစ် တွေ..ပါ..လို့ .ချ ပြမယ်ပေါ့ဗျာ..။
ဆာလောင်မှု.. နှစ်ခုကို… ယှဉ်ကြည့်မိတော့လည်း..
ဘယ် ဆာလောင်မှု က..ပိုဆိုးမလဲ..လို့ ..
ကျွန်တော့် ဘာသာ..မဖြေ တတ်လို့ …
အခုလို…ပိုစ့် ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ…
အဲဒီ မေးခွန်းလေး.. ပါအောင်..ထည့် ရေး..လိုက်ပါတယ် ။
အင်မတန် အကြမ်းထည် ဆန်တဲ့ မေးခွန်းလည်း.ဖြစ်ပါတယ် ။
နောက်ဆုံးဘိတ် “အ” အက္ခရာ ရောက်ရင်ဒေါ့ဖြင့် …
ဝင်ပြီး ရန်တွေ့ရလိမ့်မယ် ထင်ဒယ် ..
အပေါ်ဂ ညီလေးအံ ကြောဒါဒွေဂလည်း
ဘာမှ ဟုတ်ဘူးနော့ ..
ဂလိုဘဲ စိတ်ပေါက်တုန်း ဝင်ပွားကြည့်ဒါဘာလို့ ..
ခိုးတာကတော့ မကောင်းဘူးပေါ့လေ……..။ ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းကို ခိုးယူတာနဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆ ခိုးယူတာက အသုံးနဲနဲ လွဲနေသလားလို့….။ အတွေးအခေါ် အယူအဆကို ယူငင်သုံးလိုက်တာက တစ်ခုခု အကျိုး ရှိသွားရင် ခိုးတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် မသက်ရောက်တော့ဘူးနဲ့တူရဲ့…..။ ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးတာမဟုတ်ရင်ပြောတာလေ…..။ သူများနိုင်ငံက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို မြန်မာတွေ ယူရိုက်တာမျိုးတော့မပါဘူးပေါ့….။ ဥပမာ ဆရာသော်တာဆွေရဲ့ ကျောက်ဖြုန်းကျော်ကြီးလိုဝတ္ထုမျိုး နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းအမှီးဆိုတာ နိုင်ငံခြားကလူက (အမျိုးသမီးနဲ့တူရဲ့)သူ့ဘာသာနဲ့ ဘာသာပြန်ခါနီးမှသိသတဲ့….။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာ ၀တ္ထုထဲမှာ သူလည်းနေရာတစ်ခုရခဲ့တာပဲလေ………။ အဲဒိလိုမှီးငြိမ်းထားတဲ့စာပေတွေ ဟာ သူခိုးတွေလို့ ဘယ်သူမှမစွပ်စွဲဘူးနော်….။ နောက် ဆရာ ဇ၀နရဲ့ ဆိုးပေဟာ အမှီးပဲ….။ မြန်မာစာပေထဲမှာမရှိသေးတဲ့ ကလေး စာပေကိုဖြည့်ပေးထားခဲ့တယ်လေ………။
ခိုးယူခြင်းကို.. အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တာ.. အင်မတန်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်..။
ပြောရရင်.. ဥပဒေတွေလည်း… ရှုပ်ယှက်ခတ်နေအောင်ရှိတာပါ…။
အိုင်ဒီယာ၊ အတွေးအခေါ်တွေလည်း.. မူပိုင်မှတ်ပုံတင်လို့ရပြီး.. တခြားသူကယူသုံးရင်.. ခိုးမှုမြောက်ပါတယ်..။
ဒါပေမယ့်..ပန်းချီကျော်ကြီး.. ပီကာဆိုကတော့.. အောက်ကအတုိင်းပြောသွားခဲ့တယ်..။
အဲဒါကို.. ပန်းသီဆရာကြီးက.. အောက်ကအောက်ကအတိုင်းပြန်ပြောတယ်..။
မတူတဲ့ အမြင် တွေရော..
အချိန်တွေ..ပေါ နေလိုက်ကြတာလို့ ..တွေးမိလို့ ..
Red Colour လေးတွေ..ဆိုတော့… လှတော့ ..အလှသား..
အဲဒါ သူကြီးဘဲ နေမှာ။
သူက အနီရောင် ကွန်ဆားဗေးတစ် လူကြီး ဆိုတော့။
ဂရပ်ဖစ်သမားဆိုတော့.. လုပ်တတ်တာလေးပဲ…. လုပ်ပေးလိုက်တယ်..။
ကဲ.. ရွာသူားများ.. ယနေ့မှစ၍… နုကြစေသတည်း…။
ဒါကြောင့် ခုနလေးတင် နီနေပါတယ်လို့…
အနှုတ်မြင်နေရပေမယ့် စိတ်တော့ နည်းနည်းချမ်းသာသွားသလိုပဲ…
သူကြီးရှင့်…’ Was this answer helpful? ‘ က + ကတော့ အရောင်တူတယ်..
minus က အနီပဲဖြစ်နေသေးတယ်..အဲဒါကရော မပြောင်းတော့ဘူးလားရှင့်…
်တောက် ! (မြည်သံစွဲ အလင်္ကာသုံးပြီး စာဖြင့် တောက်ခေါက်ခြင်း) ။ ….နီကြဂျမ်းပါဂျာ…ကျနော့်တို့ကို ။
But we don’t care ဆိုတာလေး မက်ဆေ့ပေးချင်ပါတယ်။ လက်အရမ်းအားနေရင်တော့ ကိုင်စရာလေးတစ်ခု
တန်ဖိုးကြီးတာလေး ပေးပါ့မယ်လို့…. ကိုနီ တို့ မနီ တို့ကို ပြောချင်ပါအိ။
တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ စိတ်ကောင်း စိတ်မြတ်လေးထားပြီး စိတ်ငြိမ် လက်ငြိမ်ဖြစ်အောင် ပုတီး စိတ်ဖို့ လက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်။ အနီတွေအတွက် ဘာမှ ဘာမှကို မဖြစ်ပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အဲဒီလိုလုပ်တဲ့ အချိန်တွေကို နှမြောလို့ပါနော…။ အနီပေးလို့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးပြောပြီး ဒီလိုတွေရေးနေကတည်းက စိတ်ထဲ တစ်ခုခုဖြစ်နေတာပါလို့ ကိုနီ နဲ့ မနီ တွေးနေမယ်ဆိုတာသိပေမယ့် ဒီလိုအနီနှိပ်မယ့်အစား ကိုယ်လက်မခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ၀င်ဆွေးနွေးဖို့ ဦးနှောက်အသိဥာဏ်၊ အတွေးအခေါ် ၊ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမ၇ှိတဲ့ ကိုနီ မနီ လို့ပဲ ကျနော်ကလဲ ပြန်တွေးနေပါတယ်လို့။ ဒီလို ကိုနီ မနီတွေ များများရှိနေသရွေ့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်ကြီးရဖို့ တဂျီးပြောတဲ့ နှစ်တစ်ထောင် ကျိန်စာ ပါလို့ ပြောရင်း..
အလက်ဆင်းရေ …. Fighting….
ထုံးစံအတိုင်း ရေးထားတာလေးက လှပါ့တော်။
ကလေး ခိုးတာ ကနေ ကိုယ့်ကို ကလေးနေရာသွင်းပြီး စဉ်းစားကြည့်ခိုင်းလိုက်တာဘဲ။
ဒါထက် နေ့လည်က အလင်းဆက်ရဲ့ စာ ကို အသေအချာ မဖတ် ကြည့်မိသေးဘဲ မှတ်ချက်တွေ နီ တာကို နောက်မိတာ။
အဲဒါမအားတဲ့ ကြား က အချိန်ခိုးပြီး ပေးလိုက်တဲ့ မှတ်ချက်ကွဲ့၊
ငှက်ပျောသီးခိုးတဲ့ ကလေး လေးလိုပါဘဲ။
ဆက်လာမဲ့ အက္ခရာတွေ ကို စောင့်မျှော်အားပေးနေပြီပါတယ်။
အချိန်ခိုးမရလို့ မှတ်ချက်လေးတွေ မပေးဖြစ်ရင် အဲဒီ ကလေး လိုဘဲ အရီးလဲ ဗိုက်ဆာနေပြီ လို့ တွေးလိုက်နော်။
(ရွာထဲ ဝင်မှ စိတ်အဟာရ စားရတာ မဟုတ်လား)
ဘာ ဂရပ်ဖစ် ကပြောင်းသွားတာလဲ။
နု ဆိုတာနဲ့ မျက်လုံးတွေ အရောင်တောက်သွားတာ။
အနီ တွေ ကို ပြောင်းတာဆိုလဲ ဘာမှထူးမပြောင်းသလိုဘဲ။
မအားတဲ့ကြားက… အချိန်လေးတွေ… ပေးပြီး.
အေ၇ာင်လေးတွေ… လှ သထက် လှအောင် ပြုပြင်ပေးသော…သူဂျီးကိုရော
အရောင်လေးတွေ… ..နီပေးကြသော….. အချိန်ပေးနိင် သူများက်ိုရော…
တစ်သက် မငြင်းပါဘူး..လို့ ..
အတင်း ကို ဖက် မှာပါ..လို့ …